Mashruuca Guryaha Marquette Imaatinka Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Mashruuca Guryaha Marquette Imaanshaha Dutchtown
Waxaa jira war wanaagsan gudaha Dutchtown iyadoo 2021 uu dhammaanayo: Kooxda Horumarinta Lutheran waxay heshay maalgelin loogu talagalay Guryaha Marquette, mashruuc wax-ka-beddel ah oo keeni doona 60 guri oo cusub oo la dayactiray oo xaafadda ah!
Waa maxay Guryaha Marquette?
Mashruuca Guryaha Marquette waxa ku jira 14 dhismo iyo waxyaabo badan oo ka koobnaan doona in ka badan 54,000 cagood oo laba jibbaaran oo meel la dego ah, iyo sidoo kale hal unug ganacsi oo yar, oo dhan qaybta woqooyi ee Dutchtown iyo gudaha Gravois Park. Kooxda Horumarinta Lutheran waxay fulin doontaa mashruuca iyagoo kaashanaya Horumarinta Bulshada. Kadib dib u eegis deegaanka iyo taariikhiga ah, dhismuhu waa inuu bilaabmaa 10 ilaa 18 bilood ee soo socda oo uu dhammaado ku dhawaad ​​hal sano kadib taariikhda bilawga ah.
Guryaha Marquette waxay keeni doonaan 60 guri oo la dego oo la awoodi karo xaafadda Greater Dutchtown-32 unug oo dib loo habeeyey iyo 28 unug dhisme oo cusub. Qeybahaas, toban ka mid ah waxay noqon doonaan hal qol, 14 waxay noqon doonaan laba qol, iyo 36 ka mid ah ayaa ka kooban saddex qol jiif. Qaybaha saddexda qol ah ayaa si gaar ah muhiim ugu ah kaydka guryaha ee xaafadda, maadaama qaybo badan oo la heli karo ay ka yar yihiin oo ay leeyihiin hal ama laba qol oo keliya. Kirada bisha waxay u dhaxaysaa $390 ilaa $885. Si aad ugu qalanto kirada, codsadayaasha badankoodu waa inay kasbadaan ama ka hooseeyaan 60% dakhliga guud ee dhexe (AMGI). Qaybaha qaar waxay u baahan yihiin dakhli dhan 30% AMGI.
Guryaha Marquette Guryaha
Kooxda Horumarinta Lutheran waxay caan ku tahay qaadashada mashaariicda adag, iyo Guryaha Marquette ma aha mid ka reeban. "Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan ku samayno sida ugu wanaagsan kheyraadka nala siiyo," ayuu yiri Chris Shearman, Agaasimaha Fulinta ee Kooxda Horumarinta Lutheran. Mashruuca Guryaha Marquette wuxuu wax ka qaban doonaa dhismayaal dhaadheer oo banaan iyo dhismayaal duug ah oo u baahan dayactir weyn. Hoos waxaa ah 14 guri oo lagu daray mashruuca Guryaha Marquette.
Baaxadda bannaan ee bannaan ee u dhaxaysa Chippewa iyo Keokuk waxay ku soo noqon doontaa nolol iyada oo dhismo cusub oo la dego laga samayn doono baakadda madhan ee ay leedahay Maamulka Dib-u- Faa'iidaysiga Dhulka ee magaalada (LRA).
Guri dabaq ah oo afar qoys ka kooban oo u baahan dayactir la taaban karo ayaa duri doona nolol cusub oo u jirta Marquette Park.
3208 Jidka Chippewa
Dhanka galbeed ee Chippewa, lababadan oo buur ku yaal ayaa leh guri duug ah oo yar oo si tartiib tartiib ah ugu soo laabanayay dabeecadda labaatankii sano ee la soo dhaafay ee hoos yimaada lahaanshaha LRA.
3012 Jidka Chippewa
Dhulkan banaan, oo maran muddo toban sano ah, waxa uu buuxin doonaa inta u dhaxaysa guryaha qoysas badan iyo hanti isku dhafan oo hadda ku socoto baxnaanin ballaaran. Mashruucu waxa uu nus u jira xarunta Kooxda Horumarinta Lutheran ee Chippewa iyo Minnesota.
3922 Wadada Louisiana
Gurigan adag ee afarta qoys ka kooban ee ku yaal Louisiana iyo Alberta waxay arki doonaan dayactir cusub iyo soo celinta guryo la awoodi karo oo ku yaal Dutchtown.
Gurigan quruxda badan ee afarta qoys ka kooban waxa uu dib ugu soo noolaan doonaa duleel laami ah oo Minnesota ah, oo nus u jirta woqooyiga Xarunta Madadaalada Marquette iyo Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada.
Baaxadda dheer ee bannaan ee Compton iyo Winnebago waxay keenaysaa unugyo guriyood oo cusub geeskan oo kaliya meel u jirta bannaanka cagaaran ee xaafadda Gravois Park.
3721, 3729, iyo 3733 Tennessee Avenue
Saddexdan meelood ee aan la iibin waxay ku yaalliin dhismaha aan dhamaystirnayn ee Keystone Place horumarinta guryeynta. Qayb-hoosaadka, oo inta badan la dhisay horraantii 2000-meeyadii, ayaa ugu dambayntii arki doonta dhismo cusub oo kor u kacay si loo buuxiyo dhowr meelood oo bannaan. Bakhtiyaa-nasiibka ayaa dhamaantood loo qoondeeyay LRA ka dib markii horumariyahu uu buuqay ilaa wakhtiga shilku dhacay.
Meel u dhow soohdinta Dutchtown-Gravois Park, gurigan quruxda badan ee afarta qoys ka kooban ayaa arki doona looxyada oo ka soo baxaya daaqadaha iyo albaabada goor dhow.
3544 iyo 3548 Minnesota Avenue
Laba guri oo banaan iyo guryo dabaq ah oo u dhexeeya Miami iyo Potomac, dhismayaashan afarta qoys ah ayaa laga badbaadiyay kubbadii burburtay waxayna ku soo laaban doonaan nolosha Gravois Park.
3544 iyo 3548 Minnesota.
3305 Wadada Meramec
Waxaa laga yaabaa in dahabka taajka ah ee mashruuca Guryaha Marquette, dhismahan seddexda dabaq ah ee ku yaal bartamaha Downtown Dutchtown uu arki doono mashruuc dib-u-habeyn ballaaran oo la sameeyay. Bannaanka ku dhawaad ​​15 sano, dhismuhu wuxuu ka koobnaan doonaa goob ganacsi oo muhiim ah oo heer waddo ah iyo guryo dabaqyo ah oo ka sarreeya.
Sidee Mashruuca Loo Maalgeliyaa?
Ilaha maalgelinta aasaasiga ah ee mashruuca Guryaha Marquette waa iibinta cashuurta guryeynta ee dawladda dhexe iyo gobolka (LIHTC). Intaa waxaa dheer, mashruucu wuxuu heli doonaa Dhibcaha Canshuurta Taariikhda, maalgelinta Magaalada St. Louis, iyo deyn lagu bixin doono kirada mustaqbalka. Wadarta kharashka mashruuca ayaa ka badan $16.5 milyan, duritaan la yaab leh oo aadka loogu baahan yahay raasumaalka xaafadda Greater Dutchtown ee aan la maalgelin.
Kooxda Horumarinta Lutheran waxa ay ku raad joogtay dhibcooyinka cashuurta in ka badan shan sano, iyaga oo wajahaya dagaal sare oo lagu xaqiijinayo buundooyinka iyada oo loo marayo hannaan tartan oo heersare ah Guddiga Horumarinta Guriyeynta ee Missouri (MHDC). Intii u dhaxaysay 2018 iyo 2020, Gobolka Missouri xaqiiqdii waxay joojisay u dhigmidda abaal-marinaha LIHTC ee dawladda dhexe, taasoo culays wayn ku saaraysa helitaanka dhibcaha cashuuraha kuwaas oo aad muhiim ugu ah horumarinta guryaha la awoodi karo ee Missouri. Ciyaarta qayb LIHTC soo laabtay dabayaaqadii 2020. "Baahida guryo la awoodi karo aad bay u weyn tahay, haddana kheyraadku waa xaddidan yahay," ayuu yiri Shearman. Ku tartamida horumariyeyaasha kale qayb ka mid ah pie LIHTC maaha hawl fudud.
Sifeynta sii socota ee mashruuca ayaa ugu dambeyntii keentay in lagu guuleysto abaalmarinta LIHTC Diseembar 2021. Mashruucu wuxuu taageero ka haystaa guud ahaan guddiga saraakiisha St. Louis oo ay ku jiraan 25th Ward Alderman Shane Cohn, 20th Ward Alderwoman Cara Spencer, Duqa Tishaura Jones, Gobolka 78th ee Degmada Wakiilka Rasheen Aldridge, Senatar Gobolka 5aad Steve Roberts, Kormeeraha Guud ee Dugsiyada Dadweynaha St. Louis Dr. Kelvin Adams, iyo Agaasimaha Fulinta ee Maamulka Guryeynta St. Louis Alana C. Green.
Hadafka Kooxda Horumarinta Lutheran waxa lagu kala saari karaa hal weedh: "Jacayl deriskaaga." In kasta oo ay tahay urur caqiido ku salaysan, Kooxda Horumarinta Lutheran shaqadeedu waxa ay gaartaa meel ka baxsan xuduudaha fiqiga si ay u horumariso guriyaynta badbaadada leh iyo helitaanka fursadaha.
Kooxda Horumarinta Lutheran waxaa la aasaasay 2015 iyada oo ujeedadu ahayd in kor loo qaado bulshooyinka ku xeeran kaniisadahooda. Kaniisadda Lutheran-ka, oo ay la socdaan dadkeedii hore ee Jarmalka, ayaa xididdo ballaadhan ku leh aagga Greater Dutchtown. Xaafaddu waxay mar guri u ahayd Concordia Seminary. Kaniisada Lutheran ee Quduuska ah, oo ku taal Waddada Miami ee Gravois Park, waxaa la aasaasay 1850-meeyadii waxayna ahaanaysaa barroosin xaafadeed ilaa maantadan la joogo. Kooxda Horumarinta Lutheran waxay iskaashi la sameeyeen Holy Cross si loo dhiso Xarunta Farshaxanka iyo Dugsiga diyaarinta ee Eagle College, oo dhanka bari ka xigta kaniisada.
Mashruucyada Kooxda Horumarinta Lutheran ee kale
Guryaha Dugsiga Baden
Wareegii u dambeeyay ee maalgelinta LIHTC, Kooxda Horumarinta Lutheran waxay sidoo kale xaqiijisteen dhibco canshuureed mashruucooda Guryaha Dugsiga Baden ee dhanka Waqooyi. Mashruucu waxa uu u badali doonaa dugsigii hoose ee nakhshadeeyay 1907 William Ittner ee ku yaala Halls Ferry Road 50 guri oo la awoodi karo. Sida Dutchtown, Baden waxay xididdo ballaadhan ku leedahay bulshada Lutheran-ka Jarmalka, waxa soo food saartay dhaqaale-la'aan tobanaankii sano ee la soo dhaafay, waxaanay diyaar u tahay dib u soo kabasho iyada oo ay mahad naqayso. deris joogta ah iyo maalgashi cusub sida Guryaha Dugsiga Baden.
Ku soo noqoshada aagga Greater Dutchtown, Kooxda Horumarinta Lutheran waxay soo gudbisay Beerta Chippewa Mashruuca 2018. Chippewa Park waxa ku jira 15 dhisme oo dib loo habeeyey oo ka kooban 46 guri oo la awoodi karo iyo saddex goob ganacsi. Dhammaystirka ka dib, Kooxda Horumarinta Lutheran waxay u guureen xaruntooda meel cusub oo qurux badan oo ku taal Chippewa iyo Minnesota oo ay dejiyeen Maaraynta Hantida xididaysan xafiiska wadada hareeraheeda.
Guryaha Bariga Fox
Mid ka mid ah mashaariicda ugu horreeya ee Kooxda Horumarinta Lutheran wuxuu ahaa Guryaha Bariga Fox. Mashruuca waxaa ka mid ahaa laba iyo toban dhismo oo si xun u xumaaday oo ku yaal agagaarka Fox Park iyo Tower Grove East ee waqooyiga Dutchtown. Wadashaqeyn la leh Kaniisadda Masiixi Lutheran iyo Horumarinta Bulshada ee Rise, Kooxda Horumarinta Lutheran waxay muujiyeen karti ay ku qaadan karaan mashaariicda adag laakiin saamaynta leh ee dhinaca Koonfureed.
Guryaha Dugsiga Baden.
3100 Chippewa, qayb ka mid ah mashruuca Park Chippewa.
2833 Magnolia, qayb ka mid ah mashruuca East Fox Homes.
Sida 2021 dabayshu hoos u dhacayso, Kooxda Horumarinta Lutheran waxay higsanaysaa inay sii xoogaysanayso si ay sannad guul leh u gaadho. Deeq bixiye aan la garanayn ayaa bixiyay a deeq u dhiganta ilaa $25,000 tabarucaadka la helay ilaa Diseembar 31st, 2021. Waxtarkaaga waxay kaa caawin kartaa fidinta saamaynta shaqada Lutheran oo aan ku koobnayn oo kaliya horumarinta guryeynta, laakiin sidoo kale hindisayaasha beesha, maaraynta hantida taageerada, iyo barnaamijka caawimada kirada oo horeba u caawiyay in kabadan 40 qoys.
Filimka hoos Housing. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown, CID -da Dutchtown, Beerta Gravois, Housing, Iyo Estate Real. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay December 30th, 2021 .
DutchtownSTL.org Housing Mashruuca Guryaha Marquette Imaanshaha Dutchtown